Darbiyada cirridka ee Caasimadda oo leh tuwaal midab leh oo rinjiyeysanaya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDarbiyada cirridka ee Caasimadda, Midab leh leh tuwaallada rinjiyeyaasha
11 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, SAWIRADA, GUUD, TURKEY
darbiyada cawlan ee caasimadda ayaa midabo leh taabashada rinjiyeyaasha
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay midabeeysaa marinnada lugeeyaha ee lugeeya, buundooyinka iyo derbiyada madhan ee magaalada caasimada ah iyadoo ay sixir taabanayaan rinjiyeyaasha. Iyada oo mashruucan uu hirgaliyay Duqa Magaalada Mansur Yavaş, sawir-qaadeyaasha ka socda caasimadda ayaa saxiixaya hawlo farshaxan qaybo badan oo magaalada ah. Rinjiye Dejiye Şenol Karakaya iyo kooxdiisu waxay diyaarsadeen buundada 'Elmadağ Entrance Bridge underpass', Cinnah Caddesi Kuloğlu Underpass iyo Xarunta Helitaanka Macluumaadka ee Waayeelka iyo Dhallinyarda ayaa ka hooseysa bisadda Ankara iyo sawirrada tulip.
Degmooyinka Magaalada Ankara ee Caasimadda waxay midabeeyaan dariiqyada lugeeya ee lugeeya, buundooyinka iyo derbiyada madhan ee caasimadda iyo degmooyinka oo leh taabasho isku dheellitiran oo bilic leh.
Mashruucan waxaa bilaabay Duqa Magaalada Mansur Yavaş waxaana hirgaliyay Waaxda Aesthetics ee Magaalada, marinada lugta, buundooyinka iyo darbiyada la taaban karo ee madhan; Fannaanka Şenol Karakaya iyo kooxdiisu waxay la kulmayaan sawirrada.
MADAXWEYNE CHAIRMAN wuxuu kabilaabmay SLOW
Shaqooyinka farshaxanka ee ay sameeyeen iskaashiga rinjiga Şenol Karakaya oo ay iska kaashanayaan 7 rinjiyeyaal ayaa sidoo kale muwaadiniinta si weyn loogu qadariyo.
Şenol Karakaya, oo cadeeyay inay rabaan inay soo nooleeyaan astaamaha caasimada ayagoo rinjiyeeyay, ayaa bixiyay macluumaadka soo socda ee ku saabsan shaqooyinka:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan kaqeyb qaato mashruucan oo uu bilaabay Duqa Magaaladeena Mudane Mansur Yavas bishii Nofeembar 2019. Waxaan rabnaa inaan dadka siinno aragti farshaxanimo, noqoneyso magaalo casri ah oo aan u soo qaadno goobta farshaxanka ee wadada. Madaxweynaheennu sidoo kale wuxuu doonayaa Ankara inay ka takhalusto darbiyada cawlan. Ujeeddadan awgeed, waxaan ka qeyb qaadanaynaa mashruucan. Soo bandhigista nashqadeynta jidadka farshaxanka, waxaan higsaneynaa inaan nolol u helno magaalooyinka oo aan u soo qaadno dabeecadaha iyo midabada dadka dhismayaasha dhagaxa ah. ”
Sawir-gacmeedka Rabia Karakaya, oo gidaarka caasimada ku sawiray xaaskiisa Şenol Karakaya, ayaa yiri, “Ujeedadeenu waa in dadka la isu keeno meelaha ay ku ciyaaraan balakoonnada, daaqadaha iyo waddooyinka. Ku darista iid muuqaal ah magaalada. Waxaan ku qanacsanahay mashruucan qiimaha uu madaxweynahayaga Mansur Yavas siiyay farshaxanka iyo farshaxanka. Waxaan dadaal ugu jirnaa sidii aan Ankara uga dhigi lahayn magaalo midab leh annagoo midabaynayna jidadka cawrada. ”
SYMBOLS MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADDA
Rinjiyeyaashii beddelay Buundada Wadnaha ee Elmada Under, Kenan Evren Boulevard Underpass, Cinnah Avenue Kuloğlu Pedestrian Underpass iyo Xarunta Macluumaadka Dhalinta ee Dhallin-yarada looguna gudbo xaflad muuqaal ah gacmahooda sixirka; Waxa kale oo ku jira astaamaha Caasimadda, sida Ankara Cat, Ankara Cigdem iyo Ankara White Pigeon iyo buulka.
Isagoo muujinaya sida uu ugu qanacsan yahay midabaynta derbiyada, muwaaddinka 61-jirka ah ee la yiraahdo Kalender Akbal wuxuu yiri, “Shaqo u qalanta Ankara ayaa la bilaabay. Waxaan ka soo xiganeynaa howlihii uu Mansur President siiyay ahmiyada farshaxanka. Waxaan ku nool nahay dhexyaal la taaban karo oo waxaan ku furaynaa midabyo dabiici ah. Suldaan Akbal wuxuu yidhi waad ku mahadsantahay dadkii gacan ka geystay, Sultan Akbal wuxuu sheegay inuu hiwaayad u yahay hiwaayad isla markaana soo jiidatay dareenka sawirada isagoo sii maraya marinka. Sidoo kale waa faa'iido in la sameeyay gaar ahaan marinnada maxaa yeelay lama ogaan jirin inuu jiro guntin marka la goynayo. Waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa Madaxweynaha Mansur qiimaha uu siiyay Ankara iyo fanaaniinta. ”
Diyaargarowga darbiyada Bursaray ayaa laga wada hadlay
Gudoomiyaha Gobollada ee BBP Bursa Ünsal: BURSARAY derbiyada waxay ka samaysan yihiin caws macmal ah iyo…
Soo bandhigida hindisada: Baabi'inta iyo Dhismaha Dhismooyinka Isgooyska Tareenka
Ogaysiiska wax soo iibsiga: Rinjiyaynta Gaadiidka Gaadiidka ee Gökdere iyo Kestel
Mashruucyada Tijaabada ee Jaamicadda ee 7 ayaa Dhimatay Dhagaxyada Dhismaha
Qodobka Topkapı Palace ee Walling Walls oo Halis Ugu Jira
Ogeysiinta Qandaraaska: Khadka Konya-Karaman KM: Dabayl ayaa la sameyn doonaa inta u dhaxaysa 84 + 500 - 88 + 700…
Socdaal mug leh oo mug leh oo leh gaadhi telefishan ee Uludag
Sawirrada midabka leh ee Palandöken
Buundada Isgoyska Kabtanka wuxuu noqday mid midab leh
Ogeysiis Qandaraasle ah: Rinjiga cawlaanka caanoodka ah waxaa la iibsan doonaa (TUDEMSAS)
Cinnah Caddesi Kuloğlu Meelaha lugta lagu maro
Buundada Isugeynta ee Elmadağ
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa si loo hubiyo badbaadada nolosha iyo hantida dariiqyada waaweyn ee xuduudaha adeegga, in laga tirtiro xadgudubyada taraafikada iyo in la sameeyo isku socod joogto ah oo taraafiko ah. [More ...]
Metropolitan caasimadda, Kizilay Esenboğa ayaa la socda hindisada